Iinoveli ezingama-6 kwiinoveli zolwaphulo-mthetho kwindawo yokuqala yeli | Uncwadi lwangoku
Iinoveli ezi-6 ezinoveli zolwaphulo-mthetho ezikroba koku kuwa
Ndifuna ukuvalelisa ehlotyeni (endilithanda kancinci ngonyaka), nokuba yinto engekhoyo. Kusatshisa kakhulu. Kodwa ukuyilwa, sele ndikhumbula umoya wokuqala wasekwindla kwaye ndihamba nawo Oku kuthambisa inoveli yolwaphulo-mthetho ezakuphuma ngo-Agasti nangoSeptemba.
Amagama anamandla kunye namabali alindelweyo, anje eva, icandelo lesibini le Falco Kunyaka ophelileyo etyikitya iklasikhi yangoku sele UArturo Pérez-Reverte. O Ukuthula okungathethekiyo, isihloko sesine kuthotho oluphumeleleyo nolulandelwe kakhulu eBergman. Isihlanu sentsomi IMillenium kunye nombhali wayo omtsha. Isihloko sokugqibela se- URoberto Saviano kunye nezintsha ezivela eGaul Franck thilliez kunye neMelika UDavid Baldacci, Esithembisa.
1 U-Eva-Arturo Pérez-Reverte
2 Indoda eyayisukela isithunzi sayo-uDavid Lagercrantz
3 Ukuthula okungathethekiyo- uMichael Hjorth kunye noHans Rosenfeldt
4 Ibhendi yaBantwana-URoberto Saviano
5 Ubhubhane - uFranck Thilliez
6 Imayile yokugqibela - uDavid Baldacci
eva -Arturo Pérez-Reverte
Umbhali waseCagagena uxele nje ukuba olandelayo 17 ngo-Oktobha iyaqhubeka nokuthengisa eva, isihloko sesibini kunye nokuzonwabisa U-Lorenzo Falco. Siyakhumbula ukuba eyokuqala yamkelwa kakuhle ngabagxeki kunye noluntu kwaye le intsha ithatha umlingiswa kwibali elitsha elibuyela kulo xuba inyani kunye neentsomi.
Sikumatshi 1937. Imfazwe yamakhaya iyaqhubeka ikhosi kunye noLornzo I-Falcó inomsebenzi omtsha eya kukhokelela Tangier. Apho sidibana kwakhona iintlola Isizwe kunye neRiphabliki, ukugcwala kwabantu ngokungekho mthethweni kunye namaqhinga, UFalcó wayesele ezama ukufumana umphathi wenqanawa elayishwe ngegolide kwiBhanki yaseSpain ukuba atshintshe iflegi. Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi ziya kubuya ziyingozi Iziporho zexesha elidlulileyo.
Indoda eleqe isithunzi sayo -UDavid Lagercrantz
El Septemba 7, ekusungulweni ngaxeshanye kwihlabathi liphela, isavenge sesihlanu kuthotho IMillenium. Usiba lwakhe ngoku lolombhali waseSweden UDavid lagercrantz oqale isaga yasentsomini yomntu ongasekhoyo uSteg Larsson kunye Okungakubulali kuyakomeleza.
Yiyo loo nto sidibana kwakhona ne U-Lisbeth Salander kunye nentatheli uMikael Blomkvist kolunye uphando olunokuveza enye ye lolona vavanyo lukhulu kuvunyelwe ngurhulumente waseSweden kwiminyaka yoo-XNUMX. Olu phando luza kubakhokelela ku-Leo Manheimer, iqabane lenkampani yezezimali u-Alfred Ögren, ekwabelana naye uLisbeth ngaphezulu kunokuba becinga.
Ukuthula okungathethekiyo- UMichael Hjorth kunye noHans Rosenfeldt
Ababhali bekhusi baseSweden UHjorth kunye noRosenfeldt, onoxanduva kuthotho oludumileyo njenge Wallander o Ibhuloho, bakhupha i isihloko sesine ikwabongwa kakhulu Uthotho lweBergman, ifani yomntu ophambili kuyo, umphandi uSebastian Bergman. Emva Iimfihlelo ezingafezekanga, Ukuphinda ulwaphulo-mthetho y Iyachazeka ifile, ezi ziyafika Ukuthula okungathethekiyo.
Omnye usapho lufunyenwe lubulewe endlwini yakhe. Inkqubo ye- I-Torkel Hölgrund yoLwaphulo-mthetho Nguye ophethe ityala, uphando oluye lwanzima ngakumbi kukufumanisa umzimba walowo wayengoyena mrhanelwa ophambili kulwaphulo mthetho. Kodwa UNicole usindile, Umtshana oneminyaka eli-XNUMX ubudala, onyawo zakhe zikhokelela ehlathini ngasemva kwekhaya losapho. UBergman kufuneka amfumane ngaphambi kokuba kuhlwe kakhulu.
Ibhendi yamakhwenkwe -URoberto Saviano
Ipapashwe kwi Agasti eli bali lase-Italiya URoberto Saviano, obuyela kumhlaba awaziyo ukuba aqhubeke nokubalisa malunga nenyani engathandekiyo.
Singaphakathi Naples apho sidibana khona Iqela labantwana abalishumi oceba ukumisa eso sixeko. Bakhokelwa nguNicolás Fiorillo, ogama linguMaraja, kwaye bafuna ukufumana inxaxheba ukurhweba ngokungekho mthethweni neziyobisi. Ukuthatha ithuba lokungabikho okushiywe ziintsapho ezithile ze-mafia, badibana nenkosi endala ukuba iqale ukunyuka. Kwaye amandla omelezwa kuphela kukufumana imbeko, ukuhlwayela uloyiko kunye nokusebenzisa ubundlobongela. Kodwa yonke into inayo iziphumo.
IPandemia -UFranck Thilliez
Ngeemvakalelo zokugqibela ze polar IsiFrentshi, u-Thilliez uzikhethele i-niche ngothotho lwamapolisa uFURanck Sharko kunye noLucie Henebelle. Le yi elesithandathu isiqinisekiso.
Ezintathu ii-swans zifunyenwe zibulewe ngu isifo esingaziwayo emantla eFrance. U-Amandine Guérin, umphandi e-Institut Pasteur, uphethe uphando apho azakusebenzisana nesibini samapolisa uFranck Sharko noLucie Henebelle. Abathathu kuyakufuneka bajongane nobhubhane ongaqhelekanga Isasazeka kwilizwe lonke kwaye ifumana umthombo wayo.
Isigayo sokugqibelaUDavid Baldacci
Ityala lesibini lika UAmos Decker, oyena mntu uphambili onesifo hyperthymesia, de Imemori iyonke.
UMelvin mars ilinde eyakho ukubulawa ngenxa yobundlobongela Ukusuka kubazali bakhe kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo. Kodwa bayamnika inceba xa enye indoda ivuma ukuba ingumenzi wobubi.
UAmos Decker unomdla kweli tyala kaMars emva kokufumanisa ifayile ye- ukufana Bobabini babelana: Bobabini babengabadlali bebhola abanetalente abanemisebenzi ethembisayo ephazanyiswe yintlekele. Iintsapho zabo nazo zabulawa ngokumasikizi kwaye, ngokudibeneyo, omnye umrhanelwa uvela kwiminyaka kamva ukuba avume ityala. Kodwa loo mrhanelwa unokuba ethetha inyani ... okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iinoveli ezi-6 ezinoveli zolwaphulo-mthetho ezikroba koku kuwa
UJose Antonio Gonzalez sitsho
Ndingathanda ukwazi isihloko sencwadi esiya kuba kukuqhubekeka kokuthula okungathethekiyo nguMichael Hjorth noHans Rosenfeldt kwaye xa izakupapashwa
Phendula kuJosé Antonio González
Enye yeencwadi ezingenakho ukungabikho kuluhlu lweenoveli zolwaphulo-mthetho zibalaseleyo yi "La Centésima Puerta" ngu-Alfredo Cernuda. Andiqondi ukuba awukathethi ngayo okwangoku ukuba yenye yeencwadi ezilungileyo endizifundileyo kwaye wonke umntu athetha ngazo.
UJane Austen. Bicentennial yokusweleka kwakhe. Imisebenzi yakhe ebalulekileyo.